Wararka Maanta: Khamiis, Oct 28, 2021-Hoggaamiyaha Ahlu Sunna oo ka hadlay sababtii ay uga baxeen degmada Guriceel
Sheekh Shaakir ayaa ugu horeyn sheegay inuu kaga tacsiyadeeynayo dhamaan dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerar uu ku tilmaamay isbaheysi gardaro ahaa oo lagu soo qaaday degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud.
Waxuu sidoo kale sheegay inuu aad uga xunyahay in dowladda Fedaraalka hub iyo ciidan ay kasoo dirtay Muqdisho ay ku burburisay goobahii muhiimka u ahaa bulshada sida Caafimaadka, Waxbarashada, Ganacsiga iyo waliba guryahii umadda Soomaaliyeed.
Sheekh Shaakir Waxuu sheegay sababta ay uga baxeen Guriceel in ay tahay codsi kaga yimid ganacsatada Magaalada, Culimada, Senataro, siyaasiyiin reer Galmudug ah iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolkaasi.
"Waxaan rabaa in aan u sheego umada soomaaliyeed in aan markii horeba soo dhawaynay baaqyadii nabadda iyo wada-hadalka iyo in aysan dhicin dagaal aan kan shabaab lagula jira ahayn, waxaana u caddaynayaa ummadda somaaliyeed in aan soo dhawaynay mar labaad baaqyada ka imaanayay Culimada , Cuqaasha , Ganacsatada , Siyaasiyiinta , Midawga musharaxiinta iyo beesha caalamka annaga oo tixgalineyna Shacbigeena" ayuu yiri Sheekh Shaakir.
Hadalkan Hoggaamiyaha Ahlu Sunna Sheekh Shaakir Cali xasan ayaa imaanaya iyadoo maalin ka har xoogagga Ahulu-Sunna ay isaga baxeen magaalada Guriceel, kadib dagaal lagu hoobtay oo afar maalin oo xiriir ah ku dhaxmaraayay ciidamadiisa iyo ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlu Sunna oo isku dhinac, kaasoo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh.